Sababaha Keena Dhareerka Xilliga Hurdada - Daryeel Magazine
Qormadan oo aynu Afsoomaali usoo rognay waxa ay ka warramaysaa dhibaatooyinka caafimaad ee dhareerka xilliga hurdada la isku arkaa astaan u noqon karo. caafimaad ahaan xaaladdan waxaa loo yaqaannaa ereyga ‘Sailorhea’ oo macnihiisu yahay, ‘Dhereerin xad-dhaaf ah’. Waxaa jira qanjidho badan oo shaqadoodu tahay dhareer soo saarista, laakiin waxa ay soo saaraan dhareer xaddidan oo afku haysan karo, marka laga reebo xaalado yar oo kooban. Dhareerka ay qanjidhadani habeenkii soo saaraan waa uu ka yar yahay, xaddiga ay soo saaraan marka aanu qofku hurdin. Dhinaca kalana qofku marka uu soo jeedo si aanu is dareemayn ayaa uu dhareerka saayidka ah ee afkiisa ku soo dhaca u liqaa, liqistaas awgeed ayaana keenaysa in qanjidhadani dhareer badan soo saaraan si ay u kabaan hadba inta uu qofku liqo. Halka marka uu qofku hurdo ay muruqyada wejigu dabcaan, isla markaana aanu u liqayn dhareerka saayidka ah ee afka ku soo dhaca, sidaa awgeed uu ku ururayo aakhirkana afka ka soo fatahayo ee bannaanka u soo baxayo. Haddii aad u fiirsato marka uu qofku dhareerinayaa waa marka uu dhinac u jiifo, haddiise uu dhabarka u jiifo dhareerku soo fatahi maayo ee afka ayaa uu ku gudo jiraa, oo qofku marka uu yara baraarugo ama is rogo uu liqayaa.
2. Asiidhka caloosha: Asiidhka caloosha, ama waxa aynu u naqaanno Gaasta ayaa ay dhakhaatiirtu sheegeen in ay keento hungurigu sameeyo dhaqdhaqaaq isaga oo tusaale ahaan isku dayaya in uu celiyo asiidhka uu ka baqo qabo in ay caloosha ka soo noqoto oo dhuunta soo gaadho. Dhaqdhaqaaqaas ayaa sababa in qanjidhada dhareerkuna u qaataan in la gaadhay waqtigii shaqadooda loo baahnaa oo ay soo daayaan dhareer fara badan.
Dhareerka Caruurta Ee Siyaadada Ah Sababaha Keena Cirrada Timaha Sababaha Keena Qawadka Iyo Calaamadaha Lagu Garto Sababaha Keena Dhagaxaanta Kilyaha, Astaamaha & Siyaabaha Looga Hortagi Karo